Manavao sy manatsara ny MX-Linux 19.0 sy ny DEBIAN 10.2 aorian'ny fametrahana | Avy amin'ny Linux
Amin'ity boky ity dia hanohy hanolotra a fomba mahazatra for manavao sy manatsara, samy mankany MX-Linux 19.0 como el DEBIANINA 10.2 aorian'ny fametrahana, satria ny teo aloha manangana amin'ny farany.
Mba hanatanterahana an'io tutorial efa nampiasainay a ISO fisie ny farany MX-Linux Snapshot, 64-bit, tamin'ny Desambra 2019, nantsoina MX-19_December_x64.iso, fa na iza na iza afaka misintona ny farany azo alaina avy eto, ary a ISO fisie ny farany kinova tsy miova amin'ny DEBIAN, 64-bit, ho an'ny DVD, tamin'ny Novambra 2019, nantsoina debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso, fa na iza na iza afaka misintona ny farany azo alaina avy eto.
Ho antsika ity tutorial voalohany apetraka aorian'ny DEBIAN 10 - Buster, satria ireo farany noforonina dia tamin'ny kinova taloha, DEBIANINA 9 - Ahinjiro. Izy ireo, raha te-hanontany azy ireo amin'ny fomba milamina ianao, ireto manaraka ireto:
1 Lahatsoratra teo aloha tao amin'ny DEBIAN sy MX-Linux
2 Dingana sy tolo-kevitra apetraka aorian'ny fametrahana, fanatsarana sy fanatsarana ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19
2.1 vaovao farany
2.1.1 Ny fanavaozana ny MX-Linux ihany
2.1.2 Manavao ny DEBIAN / MX-Linux
2.1.3 Fihetsiketsehana tsy voatery
Lahatsoratra teo aloha tao amin'ny DEBIAN sy MX-Linux
Ahoana ny fanatsarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux? (Jereo ny fidirana)
Ahoana ny fanamboarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux? (Jereo ny fidirana)
Avadiho ho lasa Distro mety amin'ny fampandrosoana ny lozisialy ny GNU / Linux anao (Jereo ny fidirana)
Avadiho ho lasa Multimedia Distro ny GNU / Linux anao (Jereo ny fidirana)
Avadiho ho lasa Distro Gamer kalitao ny GNU / Linux anao (Jereo ny fidirana)
Avadiho ho lasa Operating System mety ho an'ny Digital Mining ny GNU / Linux anao (Jereo ny fidirana)
Ary raha sendra izany dia te-hijery ireo lahatsoratra teo aloha ianao amin'ny MX-Linux, misy ireto manaraka ireto:
MX-Linux 17.1: Distro maoderina, maivana, mahery ary sariaka (Jereo ny fidirana)
MX-Linux 19 - Beta 1: havaozina ny Distrowatch Distro # 1 (Jereo ny fidirana)
MX Linux 19: Navoaka ny kinova vaovao miorina amin'ny DEBIAN 10 (Jereo ny fidirana)
Noho ireo lahatsoratra ireo, sy ny hafa momba Debian y MX-Linux, iza no miresaka momba ny fahasalamany sy ny fomba fametrahana azy ireo? dingana aorian'ny fametrahana, amin'ireo kinova vaovao azo amin'ny taona 2020 ireo.
Dingana sy tolo-kevitra apetraka aorian'ny fametrahana, fanatsarana sy fanatsarana ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19
Aza adino fa ny hetsika sy fonosana atolotra anao eto dia hihazakazaka sy hametraka dia izay ihany, "fonosana soso-kevitra", ary mijanona ho an'ny tsirairay ny fanatanterahana sy ny fametrahana azy rehetra na ny sasany amin'izy ireo, maninona izy ireo ilaina na ilaina, amin'ny fotoana fohy na antonony, hahafantarana sy hampiasana azy ireo, amin'ny alalàn'izy ireo mihazakazaka na mametraka azy ireo.
Ary tadidio fa ireo fihetsika sy / na fonosana ireo dia nosedraina teo aloha tamin'ny Distro roa, ary aza mangataka ny hamongotra ireo fonosana napetraka aorin'ireto. Lavitra, tsy mampiakatra ny fihinanana fahatsiarovana na CPU izy ireo, satria tsy mavesatra azy ireo ny dingana na ny daemons (serivisy). Raha te hahalala mialoha izay ampiasaina amin'ny fonosana tsirairay dia kitiho eto.
Ny fanavaozana ny MX-Linux ihany
A.- Mihazakazaha MX-Fanavaozana ao amin'ny menio na avy amin'ny menio fanombohana
B.- Mihazakazaka amin'ny a terminal manomboka "root session", mametraka ireto fonosana manaraka ireto miaraka amin'ity baiko baiko manaraka ity:
Manavao ny DEBIAN / MX-Linux
Mihazakazaka amin'ny a terminal manomboka "root session”(Root @ mycomputer $), mametraka ireto fonosana manaraka ireto miaraka amin'ity baiko baiko manaraka ity:
Fihetsiketsehana tsy voatery
1.- Avadiho ho lasa mpampiasa sudoer ilay mpampiasa noforonina avy amin'ny root root
adduser myuser root nano / etc / sudoers myuser ALL = (REHETRA: REHETRA) REHETRA
Fanamarihana: Ampidiro eto ambany ny tsipika farany izay milaza hoe: root ALL=(ALL:ALL) ALL
2.- Fanavaozana ny fiovaovan'ny $ PATH amin'ny rakitra superuser .bashrc: Ho an'ny DEBIAN 10 ihany
Fanamarihana: Tsarovy fa ao amin'ny kinovan'ny "DEBIANINA 10" raha tsy manomboka io "root session" miaraka amin'ny baiko «su -» fa tsy «su root» dia mila manavao ny atin'ny variable ianao "$ PATH" hisorohana ny olan'ny famonoana baiko, toy ny rehefa mampiasa ny baiko "Dpkg". Noho izany dia ilaina ny manitsy vonjimaika an'ity olana ity amin'ny fanampiana ny "PATH" ilaina amin'ny baiko «Export» toy izao manaraka izao:
Raha te hamaha azy maharitra ianao dia tsy maintsy ampidiro ilay "PATH" ilaina toy izao:
Mode 1: Miaraka amin'ny baiko echo
Mode 2: Miaraka amin'ny baiko nano
Ary ampio amin'ny faran'ny andalana manaraka ity:
Ampahatsiahivina: Raha miditra amin'ny baiko ianao "his -" Azonao atao foana ny mandingana an'io fomba io.
Famoronana lahatahiry atiny natokana ho azy na fampiharana vahiny ao amin'ny «/ opt /»
Fanamboarana ny safidin'ny fikirakirana Panel sy ny singa ao aminy
Amin'ny tranga izay tondroin'ity fampianarana ity, Distros DEBIAN sy MX-Linux amin'ny Tontolon'ny Desktop XFCE amin'ny Whisker Menu, ireto hetsika manaraka ireto dia azo tanterahina:
Whisker Menu: Ovao ny habeny, ny kisary menio, ny lisitry ny rindranasa tianao, ary ny safidinao hafa amin'ireo kiheba "bika sy fihetsika" izay irina amin'ny fananany.
Menu Bar: Ampio sy / na esory ny Widgets ilaina na irina ary ovao ny toerana misy azy sy ny toetrany.
Ary koa, miaraka amin'ny fampiharana Main Menu (Alacarte) afaka izy ireo Alefaso disable ny fampiharana hita sy tadiavina ao amin'ny Start Menu.
Fanamboarana ny sehatr'asa Desktop
Ao amin'ny fizarana (fampiharana) nantsoina Desktop XFCE ireto fihetsika na fanovana manaraka ireto dia azo atao:
Background: Misafidiana ambadika na maromaro ary safidio ny fomba fampisehoana mitovy na izy rehetra.
Menu: Safidio ireo safidy tadiavina na ilaina amin'ny sokajy: Menu Desktop Menu sy ny Window Lists Window.
Kisary: Safidio ireo safidy tadiavina na ilaina amin'ny sokajy: Miseho amin'ny endrika ivelany sy default.
Amin'ny tranga MX-Linux Azonao atao ny manova ny sary ambadika amin'ny alàlan'ny fanovana ny Lohahevitra GRUB "Rongony fotsy" izay tonga amin'ny toerana misy anao.
Amin'ny tranga Debian Azonao atao ny manova ny sary ambadika amin'ny alàlan'ny fanovana ny Lohahevitra GRUB "Starfield" izay tonga amin'ny toerana misy anao.
Fanamarihana: Ity fanovana ity dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny manova rakitra fanaingoana of the Lohahevitra GRUB efa nampiasaina, fa tsara kokoa ny mametraka ilay rindranasa "Custom GRUB" ary hanao an'ity fanovana ity, ary manararaotra ihany koa ny fanamboarana ny tsipika fampidiran'ny GRUB.
Customized Desktop Customization
En MX-Linux efa voapetraka ny application (Conky Manager), fa amin'ny Debian ilaina ny mametraka azy. Vantany vao apetraka sy alamina dia mila misafidy fotsiny ianao ampanjifaina ny Conky ny safidintsika.
Manamora ny fanaingoana ny .bashrc fisie faka sy mpampiasa.
Manomeza fanampiana ho an'ny hetsika mandroso, toy ny fanangonana kernel na fampiharana hafa.
Omeo fanampiana ireo rindranasa manan-danja ho an'ireo mpampiasa mandroso (haino aman-jery, gamer, developer, sns).
Omeo fanampiana feno ny hetsika famerenam-bidy / fanalefahana amin'ny rafitra fiasa.
Mametraha plugins sy rindranasa fototra (tena ilaina sy / na ilaina) raha ny Terminal Interface (CLI) no resahina.
Mametraha add-ons sy fampiharana fototra (tena ilaina sy / na ilaina) amin'ny resaka Graphical Interface (GUI).
Apetraho ny fonosana fampiharana fialamboly sy fialamboly (lalao) fototra (tena ilaina sy / na ilaina) ho an'ny mpampiasa iraisana (mandeha ho azy ny birao).
Raha amiko, andramo ity fomba ity ny MX-Linux Distro 19 ahy hiteraka ny ISO azo entina sy azo alaina vaovao miaraka amin'ny fanaingoana be indrindra sy fanatsaranaizay antsoiko matetika "FAHAGAGANA", izao ao amin'ny 2.0 version. Apetrako ny pikantsary mba hahitanao ny vokany:
Hatreto, ity ampahany voalohany amin'ity fampianarana ity. Ao amin'ny fizarana faharoa dia hanome hevitra izahay fa ny fonosana (fampiharana) hafa dia asaina manohy manatsara (mameno) ny Distros DEBIAN 10 sy MX-Linux 19.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «DEBIAN y MX-Linux», ao amin'ireo kinova farany sy farany indrindra ho an'ny taona 2020, hahatratrarana azy «actualizarlas y optimizarlas», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Manavao sy manatsara ny MX-Linux 19.0 sy ny DEBIAN 10.2 aorian'ny fametrahana
Raha ny fantatro eo amin'ny pejy MX ofisialy dia tsy misy MX-19_December_x64.iso Ary rehefa tsindrio ny rohy dia avelany ao amin'ilay lahatsoratra, ISO 0 kely no alaina.
Heveriko fa ity lahatsoratra ity, alohan'ny hanaovana izany tsara, dia hiteraka fahasarotana ho an'ireo izay manaraka ny torolàlana.
Tolo-kevitro: alaina ny ISO ofisialy avy amin'ny tranokala MX; apetraka ary ampifanaraho amin'izay hifanaraka amin'ny rehetra.
Miarahaba, ry Gerson malala. Halefako eto ny valiny nomeko anao tamin'ny Telegram:
Efa namboariko ilay rohy simba! Tamin'ny fotoana nanoratako ny lahatsoratra raha toa ka misy ISO tonga lafatra an'ny MX-19_December_x64.iso, rehefa nasehoko anao ny pikantsary tamin'ny ISO alaina, fa ny sary rehetra nanomboka ny volana desambra dia tonga amin'ny zero (0) kb ankehitriny.
Rehefa nampidina azy aho dia tonga lafatra, nefa ataoko fa nisy nametraka repo tao amin'ny 0 Kb ary niara-nitovy tahaka izany izy rehetra. Ny tiako holazaina dia tsy ahy ny lesoka. Koa satria tsy mitantana ireo repo aho dia nalefako tonga lafatra. Ary na iza na iza ny fitaratra MX-Linux voafantina, ny sarin'ity volana desambra ity dia aotra, fa eo kosa ny vola ampiorina.
Saingy efa nahitsiko ny rohy, noho izany dia misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra sarobidy toy izany. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra!
Fanahy iniana; Azonao atao ve ny mametraka kernel Liquorix avy amin'ny toerana itobiana?
Miarahaba, Gerson! Tsia, fa hanao lahatsoratra momba izany aho momba io lohahevitra io. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Osvaldo santos dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra ity, fanampiana lehibe tokoa ny manomboka nefa tiako ho fantatra izay ataon'ny tsirairay amin'ireo baiko, ny sasany fantatro fa ny hafa tsy, heveriko fa ny sisa amin'ny besinimaro tsara raha fantatrao hoe inona izy ireo. Misaotra betsaka indray
Mamaly an'i Osvaldo santos
JonathanMG dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manampy ny kerobika Liquorix Kernel Stable amin'ny iso anao mba hanatsara kokoa sy hamoronana ISO vaovao? Tsy hitako ny rohy fampidinana ny kinova v2.0 🙁
Valiny tamin'i JonathanMG
Miarahaba anao JonathanMG! Tsy mbola nampakatra ilay 2.0 aho, saingy nanandrana ny Liquorix Kernel teo ary tsy mbola nahita olana momba azy io. Tsy hampidirina izy io, fa kosa hasiako hevitra fa azonao ekena izany tsy misy olana.
Ok noho ny antony tsy ahitako ny kinova 2.0 alaina, rahoviana no hisy izany? Mety ho azo ampiharina tokoa fa ao anatin'ny rafitra dia hamela anao hisafidy izy rehefa hametraka azy io, mety hahaliana indrindra miampy ny kinova miorina na ilay tsy milamina, manantena aho fa handray ny hevitro satria tsy misy distro manome anao izany safidy izany
Tanisao ny fanavaozana vaovao an'ny KDE Applications 19.12.1